सहर र देश | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: शहर र देशहरू
ट्रय कहां छ?
ट्रॉय कता अवस्थित छ? ट्रोई टर्की मा अवस्थित छ। पुरातत्वविदहरुको प्रयासका कारण पुरानो शहर ट्रोयको स्थान स्थापना गर्न सम्भव भएको थियो - यो एसिया माइनरको उत्तरपश्चिममा एजियन सागरको किनारमा अवस्थित थियो। खुल्ला ...
जब 2015 मा सेन्ट पिटर्सबर्गमा तिनीहरूले पुल निर्माण गर्न थाले?
२०१ St. मा सेन्ट पिटर्सबर्गमा कहिले पुलहरू खोलिनेछन्? सेन्ट पीटर्सबर्गमा प्रति घण्टा पुलहरूको तालिका पहिले नै ज्ञात छ। हो, वर्तमान परिवर्तनहरू यस तालिकामा सम्भव छ (तपाईं सबै कुराको भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्न), तर ...
पेरिसको हतियारको कोटमा चित्रण गरिएको छ?
पेरिसको हतियारको कोटमा के चित्रण गरिएको छ? निश्चित रूपमा एक जहाज र अधिक धेरै। हतियारको यो कोट पाँचौं चार्ल्सको शासकको अधीनमा आधिकारिक स्थिति प्राप्त गर्‍यो। समयको साथ यसको रूप परिवर्तन भयो। हाल ...
क्या चेन्या, इन्गुसिया र दागस्किस्तानमा समलैंगिकहरू छन्?
के त्यहाँ चेन्निया, ईन्गुशेटिया र दागेस्थानमा समलिays्गी छन्? ))))))) एउटा चाखलाग्दो प्रश्न, मलाई लाग्छ कि त्यहाँ जताततै ट्राफिक पुलिस, डेपुटीहरू र फुटबल रेफरीहरू छन्))))) चेचन्या, इंगुशेतिया र दागेस्तान, यदि मैले गल्ती गरेन भने, यी देशहरू हुन् ...
कुन पोलिश शहरमा एकजुटता आन्दोलनको उत्पत्ति भयो?
कुन देशलाई एलाबासँग सम्बन्धित छ?
एल्बा टापु कुन देशको हो? एल्बा टापु इटालीको एक क्षेत्र - टस्कनीमा अवस्थित छ। तदनुसार, यो यस देशको हो। एल्बा मुख्यतया नेपोलियनको लागि निर्वासनको ठाउँ भनेर चिनिन्छ। त्योमा ...
वोरोनिश मा केन्द्रीय बजार को खुलने को घन्टा? रेलवे स्टेशनबाट कसरी प्राप्त गर्ने?
Voronezh मा केन्द्रीय बजार को खोल्ने समय? रेलवे स्टेशनबाट कसरी पुग्ने? अन्तमा, शहरवासी र किसानहरू भोरोन्जमा नयाँ केन्द्रीय बजार खोल्नको लागि कुर्दै रहे। विशाल, प्रकाश, दुबै खरीददारका लागि र सहज ...
गाजा कहाँ छ (राजनीतिक वा कुनै अन्य विश्व नक्शा)?
गाजा पट्टी कहाँ अवस्थित छ (राजनीतिक वा संसारको कुनै पनि अन्य नक्शा मा)? गाजा पट्टी इजिप्टको सिमाना नजिक इजरायलको दक्षिणी भूमध्यसागरको किनारमा भूमध्यसागरीय तटमा अवस्थित छ। क्षेत्र खोज्नुहोस् ...
रूसका कुन शहरहरू पुन: नामाकरण गरिएका छन्?
रसियाका कुन शहरहरूको पुन: नामकरण गरिएको छ? उस्टिनोभ-इजेव्स्क कुइबिशेव-समारा व्याटका-किरोव येकतेरिनबर्ग-सेर्द्लोभ्स्क अण्ड्रोपोभ-रायबिंस्क डजाउडझीकाउ-अर्ड्जोनिकिड्जे-व्लादिकावकाज लेनिनग्राड-सेन्ट। पीटर्सबर्ग त्सारिट्सिन-स्टालिनग्राद-भोलगोग्राड कालिनिन-ट्राभ क्रोस्कोड नोर्सिन्ड नोर्सी। माथिको पुन: नामाकरण गरिएका शहरहरूमा: एलेक्सान्ड्रोव्स्क ...
पोट्सटस्कमा के देख्न सकिन्छ? कहाँ जाने?
तपाईं Polotsk मा के देख्न सक्नुहुन्छ? कहाँ जाने? स्मारक Vseslav Charodey को स्मारक। EFROSINIA POLOTSKAYA को स्मारक। तपाईं केवल BATTLE GURORY MURAL AROUND BOLKLE POLOTKK बेलारुसको एउटा शहर हो, जुन पहिले Polovtsian रियासतको केन्द्र हो, एक प्रभावशाली शहर ...
अमेरिकी विद्यार्थीहरूले कुन विदेशी भाषा सिक्न सक्छन्?
अमेरिकी स्कूली बच्चाहरूले कुन विदेशी भाषा सिक्छन्? अमेरिकी स्कूली बच्चाहरूले सिकाउने बेला बिभिन्न भाषाहरू अध्ययन गर्छन्, यो स्प्यानिश हो, र जर्मन, इटालियन, र उनीहरूले दुर्लभ भाषाहरू पनि सिक्दछन्, उदाहरणका लागि हिब्रू। अमेरिकामा, केवल ...
अमेरिकाले चीनलाई कसरी कति तिर्छ?
अमेरिकाले चीनलाई कति तिर्नु पर्छ? यस समयमा अन्तर्राष्ट्रिय चिनियाँ रेडियो (MCR) को रिपोर्ट अनुसार उनीहरुको राष्ट्रिय debtण २.2,55 ट्रिलियन अनुमान गरिएको छ। बराबर सुन मा डलर। उही समयमा, राज्य debtणको अतिरिक्त, त्यहाँ व्यक्तिगत कम्पनीहरूको debtsण पनि छन् ...
नदीले बाघहरूको नाम दिए?
नदीले बाघलाई आफ्नो नाम दियो? के तपाईको मतलब उसुरी नदी हो किनभने त्यहाँ उसुरी बाघ छन्? त्यहाँ अमूर नदी पनि छ र त्यहाँ अमूर बाघहरू पनि छन्। वास्तवमा, अमूर, सुदूर पूर्वी, उसुरी बाघहरू, यी सबै ...
कुन देशको फ्ल्याग (र किन) पारंपरिक आयताकार आकार होइन?
कुन देशको झण्डा (र किन) परम्परागत आयताकार आकार होइन? राष्ट्रिय झण्डा को परम्परागत आकार एक आयत छ। केवल लम्बाई र उचाईको अनुपात फरक छ। यसबाहेक, राज्य फ्ल्यागको सम्पूर्ण विविधता वास्तवमा कम छ ...
उत्तरीको ल्यान्ड पोइन्ट के हो?
जमिनको उत्तरी भाग के हो? केप मोरिस जेसुप भूमिको उत्तरी भाग हो। उनी ग्रीनल्याण्डमा अवस्थित छन्। तर केही स्रोतहरूमा यस टापुलाई काफ्क्लुब्बेन भनिन्छ। केप अमेरिकीले १ 1900 ०० मा पत्ता लगाएको थियो ...
संसारको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रपति?
संसारमा सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रपति? आज सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रपति चामोन्ट पेरेस हुन् - इजरायलका राष्ट्रपति, उनी 90 ० वर्ष पुरानो छ। विश्वका सब भन्दा पुरानो राष्ट्रपति शिमोन पेरेस हुन्, जो इजरायलका राष्ट्रपति हुन्। उही हो र…
रेड स्क्वायरमा कस्तो ठूलो सूटकेस देखिन्छ?
रेड स्क्वायरमा कस्तो विशाल सूटकेस देखा पर्‍यो? GUM को व्यवस्थापन को तर्फबाट, लुइस Vuitton संरचना तुरुन्तै भत्काउन को लागी एक मांग पठाएको छ। व्यापार संगठनको असन्तुष्टि को कारण घोषित आकार र वास्तविक व्यक्तिहरु बीचको भिन्नता हो। मंडप ...
रोस्तोभ-ऑन-डोनमा सबैभन्दा ठूलो भवन के हो?
रोस्तोव-डोनमा सब भन्दा अग्लो भवन के हो? यदि मैले गल्ती गरेन भने मलाई लाग्छ कि यो घर शहरको बीचमा अवस्थित छ र रोस्तोव-शहर परिसरको अंश हो। नयाँ, आधुनिक, सुन्दर। यो जटिलले सम्पूर्ण ब्लक ओगटेको छ ...
कुन युरोपेली राष्ट्र रुसको नजिक छ?
कुन युरोपेली देश रुसीहरूको नजिक छ? सर्बहरू। एक मात्र यूरोपीय राष्ट्र जुन लगभग सबै कुरामा रूसीहरूसँग नजिक छ। र लोक कलामा र विश्वासमा र वर्णमालामा पनि। क्रान्ति अघि पनि ...
तपाईं कुन सडकमा बस्नुहुन्छ? उनको कथा कस्तो छ?
तपाई कुन सडकमा बस्नुहुन्छ? उनको कथा के हो? म चापाभ सडकमा बस्छु। मेरो शहरको यो सडक सानो छ र यसमा उल्लेखनीय केहि छैन। सबै वस्तुहरूमा गणना गर्न सकिन्छ ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 177 अर्को पाना
78 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,238 प्रश्नहरू।